Margarita Mix Santa Santa Monica 2015 Telly Awards ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » မာဂရီးရောနှောစန်တာမော်နီကာ 2015 Telly ဆုပေးပွဲဆွတ်ခူး
စန်တာမော်နီကာ,, CA (စက်တင်ဘာလ 28, 2015) - မာဂရီးရောနှောစန်တာမော်နီကာ, ကြော်ငြာနှင့်ကြော်ငြာမီဒီယာများအတွက်အသံပို့စ်န်ဆောင်မှုကိုအထူးပြုတဲ့ FotoKem ကုမ္ပဏီ၏ရောနှောနေသန် Dubin, ဂျင်မီ Hite နှင့်ပေါလု Hurtubise, အ 36th နှစ်ပတ်လည် Telly ဆုပေးပွဲအတွက်ဆုရရှိသူအမည်ရှိပြီ ။ Dubin Kia အတွက် "တိရစ္ဆာန်များ" ပေါ်တွင်မိမိအလုပ်, တစ်ဦးငွေ Telly, အမြင့်ဆုံးဂုဏ်ပြုဆုရရှိခဲ့သည်။ Hite "အဆိုပါသင်္ဘောကို" Nissan ကားရဲ့တစ်ကြေး Telly အနိုင်ရနှင့် Hurtubise Hyundai ရဲ့အဘို့အကြေးယူ "ဒါဝိဒျ Feherty နှင့်အတူယာဉ်မောင်းသိကောင်းစရာများ။ " အားလုံးသုံးရောနှောနေတဲ့ဒေသဆိုင်ရာတီဗီ / Multi-စျေးကွက် cable ကိုစီးပွားဖြစ်များအတွက်အသံ / အသံဒီဇိုင်းအမျိုးအစားအတွက်ဂုဏ်ယူနေကြသည်။
အဆိုပါ Telly ဆုပေးပွဲအားလုံး 12,000 ပြည်နယ်နှင့်နိုင်ငံအများအပြားကနေနီးပါး 50 entries တွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဆုရရှိသူအများဆုံးလေးစားဖွယ်ကြော်ငြာအေဂျင်စီများ, ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီများ, ရုပ်မြင်သံကြားဘူတာ, cable ကိုအော်ပရေတာများနှင့်လောကရှိကော်ပိုရေးရှင်းကဗီဒီယိုဌာနများရဲ့အကောင်းဆုံးအလုပ်ကိုယ်စားပြုသည်။
"တိရစ္ဆာန်များ," ဒါဝိဒျ & ဂေါလျတ်အားဖြင့်ပဋိသန္ဓေ ယူ. ပွဲချင်းပြီး, ပြန်သိပ္ပံဓာတ်ခွဲခန်း၌ဤအချိန်လူကြိုက်များ Kia ဟမ်းစတားတတ်၏။ သုတေသနခန်းထဲမှာအာဏာကိုတစ်ဦးက jolt အဆိုပါ All-လျှပ်စစ် Kia Soul EV ဖန်တီး, တစ်သွေတစ်ဦးဆွဲဆောင်မှု full-size ကိုအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟမ်းစတားသို့ပုံမှန်အရွယ်အစားဟမ်းစတားပြောင်းလဲ။ Maroon5ရဲ့တစ်ခုတည်းသော "တိရစ္ဆာန်များ" စီးပွားဖြစ်ရဲ့ဇာတ်ကောင်တစ်ခုမထားဘဲ, danceable ရစ်သမ်စောင့်ရှောက် hit စဉ် re-ဖန်တီးစမ်းသပ်မှုရန်စိတ်အားထက်သန်ခြင်း, Kia ဟမ်းစတား "သုတေသနနမူနာ" ကိုပိုမိုရရန်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စတိုးဆိုင်တစ်ခု drive ကိုအဘို့ကားကိုယူပါ။
Nissan ကားရဲ့ Pathfinder Chiat Day ရဲ့အတွင်းမီးမောင်းထိုးခိုးယူ "ဒီသေတ္တာ။ " ဟုမိုးသည်းထန်စွာမိုဃ်းချုန်းမုန်တိုင်းသော်လည်းဖခင်တစ်ဦးနှင့်သမီး drive ကိုအမျှသူတို့အမိုးအကာရှာဖွေနေတိရိစ္ဆာန်များကြုံတွေ့ရ။ ပွဲချင်းပြီး၏နောက်ခံကစား "ဒီတိရစ္ဆာန်များနှစ်ဦးတို့ကနှစ်ဦးအတွက်လေ၏ 'နေချိန်မှာနောက်ဆုံးတွင်ကားအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောမန်များ၏အသံနှင့်အတူတက် loaded ဖြစ်ပါတယ်။
Innocean ရဲ့ Hyundai မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဘို့, ဂေါက်သီးလိုလားသူဒါဝိဒ်သည် Feherty ကမ္ဘာဦးကျမ်း၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူလွှဲအကြံပေးချက်များပတျသကျမှဝင်ရောက်ခဲ့သည်ခံခဲ့ရသည်။ , အန္တရာယ်ရှောင်ရှားအဆိုပါ The Fairway of သွားလာသို့မဟုတ် drive ကိုပြည့်စုံခြင်းရှိမရှိ, Feherty ကားရဲ့အင်္ဂါရပ်များကလစ်များနှင့်အတူ intercut ငှက်လှပတဲ့အသံနှင့်သမုဒ္ဒရာနှင့်အတူဂေါက်ကွင်းပေါ်တွင် featured ဖြစ်ပါတယ်။
Dubin, Hite နှင့် Hurtubise Telly ဆုပေးပွဲ၏ယခင်ဆုရရှိသူဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကအစကသူ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်ယခင်ကတော်တော်များများ Telly ဆုရရှိခဲ့ပါတယ်ခဲ့သူ Jeff Levy, ပါဝင်သောမာဂရီး Mix မှာတစ်ဆုရရောစပ်အသင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
"ကျနော်တို့ကကျနော်တို့ကဆန်းသစ်ကြော်ငြာသံကိုဒီဇိုင်းအဘို့အဦးဆောင်စက်ရုံအောင်နှင့်ရောစပ်, မာဂရီး Mix မှာအတူတူယူဆောင်င့် high-caliber ဖန်တီးမှုစွမ်းရည်များနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုဂုဏ်ယူနေကြတယ်" ဟု FotoKem ရဲ့အကြီးတန်းဒုတိယဥက္ကဌ Rand Gladden မှတ်ချက်ပြုထားသည်။ "ဆုရ၏ကျွန်ုပ်တို့၏ဆယ်စုနှစ်ကမ္ဘာ့ post ကိုထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုအသံအနုပညာနှင့်ယာဉ်မြှ၌အကြှနျုပျတို့၏အသင်းနှင့်နည်းပညာစွမ်းရည်မှစွပ်စွဲနိုင်ပါတယ်။ "
မာဂရီးရောသမတစ်ဦး FotoKem ကုမ္ပဏီကြော်ငြာ, branded ဖျော်ဖြေရေး, ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ, ဗီဒီယိုဂိမ်း, ရေဒီယို, အထူးနှုန်းများ, နှင့် trailers များအတွက်အသံန်ဆောင်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းခြွင်းချက် In-အိမ်သူအိမ်သားအခွက်တဆယ်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ဆုရစတူဒီယိုဖြစ်ပါတယ်။ စက်ရုံသံကိုကြီးကြပ်မှုန်ဆောင်မှုများ, အသံသက်ရောက်မှုဖန်ဆင်းခြင်းကမ်းလှမ်း State-Of-The-Art ဖော်စပ်ခန်းအပြင်, 5.1 ဖော်စပ် 3D ဖော်စပ်, အသံဒီဇိုင်း, ADR, ISDN, နှင့်မှတ်တမ်းတင်စွမ်းရည်အမျိုးမျိုးကိုကျော် voice ။ မာဂရီးရောနှောတွင်တည်ရှိသည် ဟောလိဝုဒ် နှင့်စန်တာမော်နီကာ။ SPY, အခြား FotoKem ကုမ္ပဏီရှယ်ယာအာကာသ VFX, CGI တအိမျမိုးအောန်ဆောင်မှုပြီးသွားရုပ်ပုံလွှာတစ်ဦးအပြည့်အဝအကွာအဝေးနှင့်အတူမာဂရီးရောနှောရဲ့အသံဖြေရှင်းနည်းများကိုကြီးထွားများပြားစေတော်မူသောစန်တာမော်နီကာတည်နေရာ, မှာ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ခရီးစဉ် www.margmix.com.
အဆိုပါ Telly ဆုပေးပွဲအကြောင်း
အဆိုပါ Telly ဆုပေးပွဲ 1979 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးနှင့်ထူးချွန်ဒေသခံဒေသဆိုင်ရာနှင့်ကေဘယ်လ်တီဗီကြော်ငြာနှင့်အစီအစဉ်များ, အကောင်းဆုံးသောဗီဒီယိုနှင့်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်မှု, နှင့်အွန်လိုင်းကြော်ငြာ, ဗွီဒီယိုနှင့်ရုပ်ရှင်များဂုဏ်ပြုခြင်းဝန်ကြီးချုပ်ဆုချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ တရားသူကြီးများနှင့်ကြီးကြပ်မှုကော်မတီကငွေ Telly ဆုပေးပွဲ၌ရှိသမျှသောအတိတ်ဆုရရှိသူနေသောထိပ်တန်းစက်မှုလုပ်ငန်းပညာရှင်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
Fotokem isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော မာဂရီး Mix post ကိုထုတ်လုပ်မှု စန်တာမော်နီကာ Telly ဆုပေးပွဲ တီဗီနည်းပညာ 2015-09-29
ယခင်: စတူဒီယို Technologies က '' အိတ်ဆောင် Truck ကား-End ယူနစ်က၎င်း၏တိုက်ရိုက်-Link ကို Mini ကိုအဝေးမှကင်မရာမျက်နှာပြင်စနစ်မြင့်ကိုယ်ရေးဖိုင်ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲမှာ Up ကို Tees များအတွက်
နောက်တစ်ခု: မျက်စိကန်းသောသဘာဝတရား Recordist Trusts မှအသံဖုန်းများအတွက် Birdsong နှင့် Soundscapes Capture မှ